सेयर बजारमा बिशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ र हिमालय डिस्टीलरीको किन अस्वाभाविक भाउ बढ्दैछ ?3Ghumti
सेयर बजारमा बिशाल बजार, साल्ट ट्रेडिङ र हिमालय डिस्टीलरीको किन अस्वाभाविक भाउ बढ्दैछ ?
साना लगानीकर्ता सजग हुनपर्ने
शेयर | 2020-11-20 11:09:00 |
काठमाडौं, मंसिर ५ । अहिले सेयर बजारमा बिशाल बजार कम्पनीको मूल्य आकासिएको छ । नाफा नै दिन नसकेको कम्पनीको सेयर मूल्य आकासिएपछि बजारमा संशय बढेको छ । त्यस्तै साल्ट ट्रेडिङ, हिमालय डिस्टीलरी, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र होटलहरु सबैजसोको अस्वभाविक रुपमा भाउ बढेको छ ।
अहिले भाउ आकासिएका सबैजसो कम्पनीको पुँजी सानो छ । जसका कारण यि कम्पनीको सेयर निश्चीत ब्यक्तिको हातमा छ । जसका कारण केहि सिमित ब्यक्तिले चाहदा यि कम्पनीको सेयर भाउमा उछाल ल्याउन सकिन्छ ।
केहि समयअघि नाफा नै दिन नसकेका र बित्तिय पारदर्शिता नै नभएका जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा भारी बृद्धि भएको थियो । त्यसमा अस्वाभाविक भाउ देखाएर साना लगानीकर्तालाई फसाउन खोजेका ब्यक्ति अहिले आफै फसेका छन् ।
जलविद्युत पछि अहिले केहि टाठाबाठा लगानीकर्ताले साना पुँजी भएका कम्पनीको मूल्यमा अस्वाभाविक भाउ बढाएका छन् । जस्तो कि बिशाल बजार कम्पनी जसका लगानीकर्ताले बिहिबार मात्रै प्रतिकित्ता ३ सय रुपैयाँ नाफा कमाए ।
बुधबार प्रतिकित्ता ३ हजार २७ रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा बिहिबार बजार बन्द हुँदा यसको मूल्ःय ३ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ कायम भएको थियो । ५ करोड पुँजी भएको यो कम्पनिले अहिलेसम्म कुनै लाभांस दिएको छैन ।
तरपनि यसको मूल्यमा भने किन उछाल आयो ? यहि प्रश्नको मात्रै उत्तर खोज्ने हो भने पनि बजार कसरी अघि बढेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बिहिबार भएको कारोबारमा कमाउनेको सूचिमा दोस्रो स्थानमा रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल जसको पनि एकैदिन प्रतिकित्ता २८ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ ।
जबकी सञ्चालनमा आएको लामो समयसम्म नाफामा जान नसकेको भनेर देखाइरहने तारागाउँ रिजेन्सी होटलले बिगत ३ वर्ष यता देखि १२ प्रतिशत मात्रै लाभांस दिन सकेको छ । यसबाहेक सोल्टी र ओरेन्टल होटलको पनि सेयर मूल्य बढेको छ ।
जबकी सबै होटलको बित्तीय विवरण हेर्ने हो भने उनिहरु घाटामा गएका छन् । र महामारी अघिको नाफा कमाउन अझै तीन वर्ष लाग्ने स्वयं व्वयसायीको आकलन छ । होटलको मात्रै होइन, साल्ट ट्रेडिङ हिमालय डिस्टीलरी, नागरिक लगानी कोष र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको मूल्य पनि अस्वभाविक रुपमा बढेको छ ।
जसमा लगानीकर्ताले अलि सजग भएर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यि साना पुँजी भएका र नाफा कम भएका कम्पनीहरुमा पारदर्शिताको पनि अभाव छ । र ठूलो सेयर पनि निश्चीत ब्यक्तिहरुको हातमा छ । अस्वाभाविक बृद्धि गराउने र आफ्नो लगानी सुरक्षित गरेर साना लगानीकर्ता फस्ने गरेको तितो बिगत साना लगानीकर्ताले भूल्नु हुँदैन ।
नाफा दिन नसकेपनि जलविद्युुतको सेयरमा पनि अस्वाभाविक बृद्धि देखिन्छ । सेयरबजारमा ४३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको बैंकको परिसुचक भने दुई दशमलव सात एक अंकले मात्रै बढेको छ ।
सेयरबजार लहडमा लगानी गर्ने ठाउँ होइन । जहाँ कम्पनीको बित्तीय विवरण बिश्लेषण गरि त्यसले आगामी दिनमा के कति लाभांस दिन सक्छ र कम्पनीमा आर्थिक पारदर्शिता छ छैन र त्यसका सञ्चालकहरु समेत कस्तो पृष्ठभूभिका ब्यक्तिहरु छन् भनेर हेर्नुपर्छ ।
तर अहिले लगानीकर्ताहरुले लहडका भरमा लगानी गरेका छन् । यस्तो बेलामा चनाखो भएर लगानी गर्न नसक्ने हो भने लगानी घाटामा जान पनि सक्छ । त्यसैले कम्पनीले दिने लाभांसको आधारमा लगानी गर्नु उचित हुन्छ ताकि पछि लगानी गरेर पछुताउनु नपरोस् ।
बजारमा साना पुँजी भएका कम्पनीमा लगानी बढाएर मूल्य बढाउने र आफुले नाफा सुरक्षित गर्ने समुहबाट साना लगानीकर्ता ठगिने गरेको बिगत नै छ । १८ सय ८१ मा पुगेको सेयर बजारमा खरिद गर्नेहरु पछि पछुताएका थिए । ति सबैजसो कम्पनीको बित्तीय विवरण अध्ययन गरेर भन्दा पनि भाउ बढ्छ भन्ने लहडका आधारमा लगानी गर्नेहरु थिए ।
काठमाडौ, मंसिर १८ । नेप्से उच्च अंकले घटेको छ । आज बिहिबार नेप्से १५ दसमलव ५७ अंकले घटेर दुई...
एकै दिन ७० अंकले बढ्यो नेप्से, ट्रेडिङ बाहेक सबै समुहले कमाए
काठमाडौं, मंसिर १७ । नेप्से आज बुुधबार ७० दसमलव ६२ अंकले बढेर दुई हजार ७१ दसमलव दुुई अंकमा चढेको...
आज माउन्टेन इनर्जी नेपालको आइपिओ बाँडफाँट
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपालले आइपिओ बाँडफाँट गरेको छ । आइपिओ बिक्री प्रबन्धक नबिल...
नेप्सेमा सामान्य बृद्धि, कारोवार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुुलनामा घट्यो
काठमाडौ, मंसिर १६ । आज मंगलबार नेप्से सामान्य अंंकले मात्र बढेको छ । नेप्से आज तीन दसमलव ३५...
सेयर बजार पहिलो एक घण्टामा २ पटक रातो २ पटक नै हरियो
काठमाडौं । प्री–ओपन सेसनमा १२ अंकले बढेको बजार सामान्य कारोबार भएको १५ मिनेट भित्र ३० अंकले...
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले २०५ लाभांश बाँड्ने
चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव...
काठमाडौं । आज बजार खुलेको १ मिनेटमै नेप्से परिसूचकले २ हजार विन्दु पार गरेको छ। परिसूचक ३९.५४...
माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँड यही बुधबार हुने भएको छ। सेयर न...
सेयर बजारमा छाल आउँदैः एकैदिनमा बनायो यति धेरै नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । बैंकिङ समूहका बहार आएको दिन सेयर बजारमा आज ५ वटा नयाँ कीर्तिमान कायम भएका छन्...